DEG-DEG: Al-Shabaab Oo Askar Maraykan Ah Ku Laysay Somaliya - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » DEG-DEG: Al-Shabaab Oo Askar Maraykan Ah Ku Laysay Somaliya
DEG-DEG: Al-Shabaab Oo Askar Maraykan Ah Ku Laysay Somaliya
Wararka ka imanaya deggaanka Baar-Sanguuni ee duleedka Magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in galabta halkaas uu ka dhacay weerar culus oo ciidamada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay la beegsadeen ciidamo huwan ah oo iskugu jira Maraykan, Kenyaati iyo Soomaali, kuwaas oo halkaas dhaq dhaqaaqyo ka waday.
Weerarka ayaa loo adeegsaday madaafiicda goobta iyo qoryaha sabanada loo yaqaano ee garbaha laga rido, waxaana deggaankan Baar-Sanguuni uu qiyaastii 45 KM dhanka waqooyiga kaga beegan yahay Magaalada Kismaayo.
Laba diyaaradood oo nooca Heelikobtarka loo yaqaano ayaa kusoo degtay deggaanka Baar-Sanguuni kuwaas oo qaaday dhaawaca iyo dhimashada Ciidamada Maraykanka ah.
khasaaraha inta la hubo ciidamada Mareykanka gaadhay ayaa ah dhimashada 1 askari iyo dhaawaca 4 kale oo xaaladooda caafimaad ay aad uliidato.
Taliska Ciidamada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa war uu soo saaray waxaa lagu sheegay in weerar lagu qaaday Ciidamo Maraykanka ah uu ahaa mid sidii loo qorsheeyay u dhacay, isla markaana Shan ka tirsan ciidamadaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen.
Ciidamo huwan ah oo saaakiil Mareykan ah hoggaaminayeen ayaa maalmihii lasoo dhaafay dhaq-dhaqaaqyo ka waday deggaannada Buula Gaduud iyo Sanguuni oo dhammaantood dhaca duleedka magaalada xeebta leh ee Kismaayo.